Shaki kuma jiro waxa ku saabsan, youku waa mid ka mid ah website-yada video ugu caansan ee Shiinaha. Iyadoo youku, dadka Chinese ka daawan kartaa boqolaal filimada iyo bandhigyada TV dhinaca combiyuutarka, laptops, smart-telefoonada iyo murriyado, oo way gabi ahaanba bilaash ah.
Waxaa jira hal dhibaato inkastoo - aad ka heli kartaa oo keliya youku haddii cinwaankaaga ip (xarig afar lambar oo tilmaamaysaa your computer) waxay muujinaysaa in aad ku sugan tahay dhulweynaha Shiinaha. Haddii aad isku daydo in ay helaan youku marka ka baxsan dhulweynaha Shiinaha, ma waxaad awoodi doontaa inaad aragto mid ka mid ah filimada ama TV muujiyaa heli karaa via goobta. Halkii, waxaad arki doonaa shaashadda soo socda:
Si farxad leh, waxaa jira siyaabo aad Gudo kartaa xayiraad juquraafi in aad looga hortago ka helaan youku ka baxsan Shiinaha. Maqaalkani waxa uu eegi doonaa saddex siyaabood oo aad meel kasta ku raaxaysan karaan content youku adduunka idinku dhici kartaa in ay noqon.
Tubada youku u Chrome / Firefox
Haddii aadan aad u farsamo maskax marka ay timaado kombiyuutarada, waxaa laga yaabaa in aad u habka ugu fudud ee ay u dhinac-tallaabo blocks youku waa in ay isticmaalaan kordhin tubada youku u Chrome. Chrome waa browser internet abuuray by Google. Haddii aadan haysan Chrome qalabka aad dooratay (iyo Chrome ayaa diyaar u ah dhufto ee ugu) ka dibna aad kala soo bixi kartaa oo ku xidh ka halkan .
Marka aad leedahay Chrome ilaa iyo ordaya, tallaabada xigta waa inay dhidibbada u aasto kordhin tubada youku.
In sidaa la yeelo, booqo kaliya link this ee Browser Chrome ah. In geeska bidix ee kore ee shaashada aad arki doonaa button ku calaamadeysan "+ FREE" - guji on this. Sanduuqa pop-up A muuqan doonaa weydiinaya in aad rabto in aad ku darto tubada youku in Chrome. Xaqiiji in aad qabato iyo kordhinta rakibi doonaa. Marka la rakibo dhamaato, waxaad arki doontaa sax cagaar ah oo goobo casaanka iyo buluugga in bar cinwaanka Chrome - tani waxay ka dhigan tahay in dheeraad ah ayaa si guul leh ku rakiban oo uu diyaar u yahay in la isticmaalo. Haddii aad soo booqato www.youku.com in Chrome la kordhiyo tubada youku ku karti, waxaad ka heli doontaa in mar dambe ma aad hor istaagay ka arkaysid content youku!
Ogow in haddii aad jeceshahay Firefox si Chrome, waxaa jira kordhin tubada youku ah u Firefox sidoo - kaliya booqo link this ka dibna raac tilmaamaha ku-shaashadda.
Isticmaalka badalka ah
Marka aad soo booqato a web-site, xabbadood dhowr macluumaadka waxaa loo dirayaa in web-site sida ugu dhaqsaha badan aad u soo galaan. Mid ka mid ah waxyaabaha kale oo macluumaad ah in loo soo diray waa cinwaanka aad computer ee ip. Tani waa sida goobta youku og yahay haddii aad isku dayayaan in ay helaan content halka aad ka baxsan Shiinaha.
Oo waxaad dhaaftaan xadaynta taas oo isticmaalaya wakiil. Wakiil A waa nooc ka mid ah cinwaanka kala-barka aad computer iyo goobta youku ah. Ka feker haddii aad doonayso inaad u dhigma qof, laakiinse ima aydaan rabin in la ogaado meesha aad ku nooleyd. Waxaad mail cinwaan-dhexaadin, kuwaas oo markaas u soo diri doono inay qofka u rajeeyay in aad u dhigma soo diri kartaa. Kasta oo waraaqo soo laabtay kadibna loogu celiyo maray cinwaanka dhexaadin, oo markaas waa inuu dib u dhex mari lahaa in aad. Tani waa, in muddo gaaban, sida proxys shaqeeyaan.
Habka ugu fudud ee ay u isticmaalaan wakiil ah waa adigoo isticmaalaya ah wakiil online. Waxaa jira dhowr boqol oo goobood oo wakiil halkaas, sida kproxy, Aniscartujo iyo Free Web badalka. Goobta kasta oo aad dareemi doonto jiro sanduuq qoraalka halkaas oo waxaad geli kartaa cinwaanka goobta aad rabto in aad heli - in www.youku kiiskan .com. Just galaan cinwaankan sanduuqa oo guji riix Launch. Sida caadiga ah, mid ama laba xayeysiis arbushin laga yaabaa (taas oo ah sida goobaha wakiil ay lacag ka sameeyaan) laakiin waxaad si fudud iyaga la xiro karo. Daqiiqado yar ka dib youku waa arbushin ilaa biraawsarkaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad u ugaadhsadaan agagaarka u wakiil ah hufan si ay u isticmaalaan u youku, sida qaar ka mid ah si ka fiican yihiin kuwa kale, taasoo ku xidhan tahay tirada dadka iyaga oo isticmaalaya waqti. Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa goobaha wakiil cusub ee khaanada "wakiil online lacag la'aan ah" gudaha matoorka baadhaha.
Isticmaalidda Network Private Virtual (VPN)
Haddii aad rabto in aad daawato youku badan, oo aad tahay qof ka baxsan Shiinaha inta badan, ka dibna waxaa laga yaabaa in ka badan qanco, waayo, waxaad (ma aha in la yidhaahdo lagu kalsoon yahay) si ay u isticmaalaan ah Virtual Private Network, ama VPN marka la soo gaabiyo.
A Network Private Virtual waa koox xaqiijisatay kombiyuutarada in aad heli karin haddii aad leedahay nidaamka saxda ah, oo sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay username iyo password ah. Marka aad ku xidhmaan VPN a, helitaanka dhammaan goobaha internet-ka in VPN waxaa si ammaan ah ku xiran waxaad leedahay.
Quruxda VPN a waa in ay tahay ma ahan, halkaas oo adduunka aad tahay, goobta aad ku xiran yihiin qaadataa Ciwaanka IP: ga ee VPN ah sida cinwaankaaga, iyo in aan of your computer u gaar ah. Sidaas darteed haddii aad ku xiran yihiin VPN a taas oo ku salaysan ee Shiinaha, ka dibna aad ku dhawaad ​​heli kartaa goobta kasta oo billaabay in Shiinaha, oo ay ku jiraan dabcan youku.
VPNs Qaar ka mid ma aha lacag la'aan ah, laakiin faa'iidada ugu weyn ee la isticmaalayo VPN a waa in ay wax badan ka dhaqso iyo deganaanshaha badan proxys yihiin, taasoo la micno ah in aad awood u yeelan doonaan inay sii qulquli video ka youku dhow sida ugu dhakhsaha badan ee aad lahayd haddii aad ku xiran youku si toos ah naftaada. Waxa kale oo ay wax badan ka badan aamin yihiin ka dibna mudaba, taasoo la micno ah inay jirto halis yar oo dad ah ay awoodaan in ay helaan PC aad aqoon, ama fayrusyada wiswis iyo trojans muuqday on your computer aan, waxaa u furan inuu ka tago phishing iyo hanjabaad online kale.
Ku raaxayso youku meel!
Haddii aad ku raaxaysato youku ee kala duwan oo ka mid ah filimada iyo bandhigyada TV, laakiin inta badan aad naftaada ka helo meel dibadda ka ah dhulweynaha Shiinaha, markaas wali aad awoodi kartaa in ay helaan www.youku.com marka uu dalka ka maqan. Haddii aad isticmaasho mid ka mid ah saddex talooyin kor ku siiyey, markaas waa inaad weli ku raaxaysan kartaa dhammaan filimada iyo TV muujinaysaa aad rabto in aad si xushmad ah youku, meel kasta oo aad waxaa laga yaabaa in adduunka.
Sida loo Play FLV on Mac la Players FLV Bilaashka ah ee Mac
> Resource > Video > Saddex Siyaabaha Daawo youku baxsan Shiinaha